The 25 Jonglei Video Games of Time All - Rule News
The 25 Jonglei Video Games of Time All
From geesood muqdiga taariikhda ciyaaraha, halkan waa toogan jiray, platformers oo garaaceen-'em-ups qaaday maxaabiis lahayn
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “The 25 adkaa kulan video ah waqtiga oo dhan” waxaa qoray Rich Stanton iyo Will Freeman, waayo theguardian.com on Friday 18 March 2016 09.33 UTC
Ciyaaraha loo isticmaalo in ay adag tahay. Taasi ciyaartoyda halyeeyga baroorta hadda guryanta markasta oo uu aqrinayo qaar ka mid ah biqil-'em-up ama tallaabo u quudhin casri ah. Waxay u muuqataa sidii sort la mid ah ku xeeldheeraashada nostalgic in snobs music faraha la, dhaleeceeyay guutooyinkiisa oo hadda ka maqan tayada halyeeyga ah geesiyaal shalay. Laakiin iyadoo kulan, waa nooc ka mid ah oo run ah.
Sida warshadaha ayaa koray, ee horyaal weyn ayaa u dhaqaaqay dhinaca toning hoos dhib ah, si ay u siiyaan waayo-aragnimo ah oo siman sida balaadhan oo kala duwan oo ka mid ah ciyaartoyda sida ugu macquulsan. maalmahan, haddii aad rabto in aad tartan dhab ah, aad u leedahay in ay doortaan hab "adag", oo sida caadiga ah oo kaliya ka dhigan tahay cadowyo badan iyo hubka yar. Laakiin dhib waa at its ugu fiican marka ay qayb ka mid ah diinta Islamka iyo design ah: ciyaartoyda leedahay in aad ka fikirto ciyaarta si kale - iyo kasban horumarkooda.
Taasi waa dhab ahaan run for horyaal ee liiskan. Iyagu ma tahay oo dhan Classics, laakiin xitaa kuwa bayaan cadaalad darro leeyihiin tayada la ilaawi karin in inaga dhigay samray. Taas ayaa ah waxa ku adag tahay: runtii kaliya ku xanuunayso marka aad rabto inaad aragto waxa soo socda.
Naftiinna / Naftooda jinku ee Dark (Fromsoft, 2009/2011)
Naftiinna jinku ee. Sawir: From Software
Marka Fromsoft ee Hidetaka Miyazaki soo baxay in dib looga fikiro nooca tallaabo RPG ah, mid ka mid ah aasaaska cusub jiray tartan u daran. Uu fikirka ahaa: sida ciyaaryahan dareemi kartaa guul aan kabsaday qalmay dhabta ah? In ciyaarahan, xitaa ciyaartoyda dil cadaawayaashaada aasaasiga ah ugu mar kale iyo mar, si fariin shaashadda "AAD dhintay" waxaa imprinted on maskaxda. tacsida kaliya ee waa in la dilaa waa qayb ka mid ah caadiga ah ee sida Caalamka, kuwaas oo ka shaqayn. In kulan kale, dhimanayay waa failure, laakiin halkan dhimanayaan waa sida aad u bartaan, sida aad u heli fiican. naftiinna, dhimashada waa qayb ka mid ah safarka.
Kyung 'Goblins n (Capcom, 1985)
Kyung n Goblins. Sawir: Capcom
Capcom ee platformer dhinac boggan isticmaalo hanjabaad weligeed joogta oo dhimasho ay u abuuraan biimayn a si gaar ah u daran. Mid ka mid hit yaraynaysaa geesigeeda ninkii Arthur uu feertanka, wadnaha-gooye, oo kii labaadna wuxuu ahaa dilaa. cadaawayaashaada la saadaalin karin meel walba Hiilweyne, xoog-ups noqon kartaa dabin, iyo ciyaartoyda ugu ma arki dhaafay Marxaladda koowaad. Kuwa in ay gaaraan dhammaadka aad u ogaato in ay sidoo kale ku guuldareystay inuu keeno iskutallaabta quduuska ah, taas oo macnaheedu yahay noqnoqonayaan labada heer ee ugu dambeeyay, ama in keenaya ay dhacday for "dabin xeeladda ku qoray Shaydaan", oo ay leeyihiin in ay mar kale in ka badan samayn wax oo dhan. On goob adag tahay xitaa sare. Capcom, aad rascal.
Ninja Gaiden II. Sawir: Tecmo
Challenge mar walba ahayd qayb ka mid ah taxanahan Ninja Gaiden, laakiin 2008'S Ninja Gaiden II dhacay peak cusub oo waali dalbanayaan. cadaawayaashiinna Kuwani xunxunna-guriga ciyaaryahanka on xitaa adag tahay "caadi" laakiin, mar goob yahay Master Ninja, waxay ku fiicnaa weeraraan la banaan daran iyo caafimaad-qaadka arxan. In heerarka dambe, cadaawayaashaydu waxay leeyihiin cannons hubka in ay yihiin dab la sax u fidiyay oo joogta ah. Waa wax aan macquul aheyn si ay u noolaadaan waqtiyo, nevermind dilo wax. Dabcan, ee qof hab internet waxakan sameeyey oo dhan in afar saacadood iyada oo aan la hal mar ka dhacay.
Ilaah Hand (Capcom, 2006)
Ilaah Hand. Sawir: Capcom
Ilaah Hand ee failure ganacsi ka dhigan tahay dad badan oo ka mid ah fikradaha fiican yihiin weli la xaday, mid ka mid ah isagoo mitirka dhib ku-screen in ay jawaab u tahay xirfad ciyaaryahan ee. Waxaa jira afar gradations, ka heer ka mid ah si uu ugu dhinto heerka, iyo haddii aad is baaxa hareeraha uuna noqdo hooseeyo. Marka aad hesho wanaagsan at this (hore u adag) Si kastaba ha ahaatee kulanka, kor u amps sida cadaawayaashaada weerari, halkaas oo ay ku weerari doonaa ka, sidee ka badan ayuu dhaawac ay sameeyaan, iyo kordhiyaa abaal ee iyaga adkaatay. kulan yar ay sameeyaan in Ilaah Hand sameeya, oo ninna ma dhib iyo waxqabadka xerin si wadajir ah ula xarrago sida.
UFO: COL Lama yaqaan (Mythos Games, 1994)
UFO: COL Lama yaqaan, ama XCOM ee Maraykanka. Sawir: Mythos Games
Tani waa meesha taxane XCOM bilaabay, kulan dheer istaraatijiyad la dabeecad adag dhinaca play caajisaan. naqshadeeye The, Julian Gollop, sameeyey horyaal badan jeedin ku salaysan weyn ee 2D laakiin aragti isometric XCOM iyo hirgelinta ceeryaanta-of-dagaal ku daray aragti istiraatiiji argagax - askari oo badan oo laga badiyay in geeska mugdi ah aad marna hubiyaa. shisheeyaha ayaa ka faa'ideysan qaladaad, jari askari oo aad arxan, iyo dib u xoog saldhig aad galay doorashooyin adag in boobka ay dooneyso inay ku sii aadanaha ammaan. Haddii tani ay tahay wax si ay u tagaan by, waxaan xiri.
Libdhi in Black (Delphine Software, 1995)
Libdhi Si Black Sawir: Delphine
Cidday Flashback ayaa ahaa isku day hore in la keeno design a 2D guul galay 3D - iyo dhayalsan sida ay muhiim kaliya gacanta ku sax yihiin. In kastoo hore u-fikirka design-qof saddexaad eego qaar ka mid ah, Libdhi in Black uu qabtay waxaa hoos by cadow badan in u gaysan karto in hal hit a - mid argagax tusaale ahaan isagoo leh flouride yar adag-to-target in flips dhinaca qof ciyaaryahanka ka hor diridda jidhkooda oo dhan on xiriir. The cutscenes caweyn abuuray by sameeysa ee dhimashada kasta suurto gal ka dhigi waxaad la Yaabteen in dabada la luleen eyga.
Narc. Sawir: Williams
Waxaa laga yaabaa in Eugene Jarvis waxaa fiican wakiil Robotron 2084, caqabad aan macquul aheyn oo ciyaar aad u fiican, laakiin in jabkii dhabta low-fi Sayniska-fi maqan saameyn cayriin Narc ee. A ciyaarta Arcade labo ciyaaryahan bilowday Max Force iyo Man Hit, ka soo baxday inay soo dejiyo Mr Big, Narc ahaa mid ka mid ah kulan ee ugu horeysay ay si dhab ah ammaanta in gibs iyo ultraviolence - ka junkies kala duwan, punks iyo tuugo qarxi galay gobbets Zimbabwe sida qoryaha of Gubid Caddaalad. kulan Jarvis ayaa mar walba waa ay adag tahay, laakiin, la Narc,oo waxay gaadheen heer cusub oo naxariis lahayn tiyaatarka.
burburin T.V. (Williams Electronics, 1990)
burburin T.V. Sawir: Williams
burburin T.V. waa classic Arcade ah iyo u bilawday dugsiga ka mid ah design in haatan ay inta badan ku dhintay: in la sameeyo dad aad ugu baahan in aad aragto shaashadda soo socda. Mudanayaasha ayaa u san yahay, gameshow mustaqbalka halkaas oo tartame dhaqaaqo iyada oo qol la nasties dhimashada-saabsan buuxiyeen oo ay helaan abaalmarino u sii dheer iyagoo nool nool joogo. Xataa qolka ugu horeysay ka waaban doonto in ay dilaan ciyaartoyda Madaxweyne Rayaale ayaa iyo, markaas ka on, gacmo gashi iman off sida Jarvis (mar kale) oo co-naqshadeeye Mark Turmell tuujin midabka sida badan, firirka, iyo waxyaabaha qarxa qarxa on-screen sida ugu macquulsan. "Total gumaadka,"Qayliyo sheega ah. "IIIIIII jeclahay!"
Simpsons The (Konami, 1991)
Simpsons The. Sawir: Konami
Waxaa dhici karta in tirada wax ka mid ah Arcade garaaca-em-ups barta this - TMNT, X-Men, xataa dagaalama Final - laakiin marka la eego lacagta qadaadiicda hufan fuuqsata dhex bandhig qurux badan iyo dhib aan dabiici ahayn, waa adag tahay in hogaanka ciyaarta Arcade Simpsons. muuqaallada The, animations, cadaawayaashaada iyo xaaladood waa mid gaar ah iyo si cad shaqada jacaylka (ka duwan script ah) laakiin ciyaarta waxaana Dareeri Hoostooda waa slugfest darra ah in gaar ahaan jecel yahay ciyaartoyda stunlocking - halkaas oo mid ka mid hit keenaysaa in dad badan oo dheeraad ah.
Takeshi ee Challenge (Taito Corporation, 1986)
Takeshi ee Challenge. Sawir: xirfad
Asal ahaan qorsheeyay sida version 8bit uu TV show Takeshi ee Castle ah, Jilaaga Japanese iyo agaasimaha Takeshi Kitano halkii helay gacan-ku la Takeshi Chōsenjō lahayn oo abuuray ciyaar ka duwan wax kasta oo kale - mid ka mid ah, kuwaas oo baakadaha ka digay in "xirfadaha ciyaaraha caadiga ah ma khuseeyaan". Caagga socda salaryman ah oo ku riyoonaya inuu helo maal,, Takeshi ee Challenge kor u adeegta Game In ka badan a for "qalad" gashtay sida aan ka tago shaqada qof ee, guuldareystay inuu naagtiisa ku furo, ama ma garaacid dadka xaq u. Waxaad ka heli kartaa Game a badan shaashadda sirta ah. Dhibaato kale waxay u baahan tahay aad ka tagto qofka xukuma ee Sucuudiga saacad. kulan oo dhammu waa aabo yeelin: kaliya Takeshi ee Challenge ammaanaa in xaqiiqda ah.
anshaxa xun (Michael Toy / Glenn Wichman, 1980)
anshaxa xun. Sawir: Michael Bunduqda iyo Glenn Wichman
Sidaas asalka u gollayaasha nooca ah, Anshaxa xun yahay godka crawler ah hannaan ahbaa halkaas oo dhib ah - in dareenka waxa ay doorato inay ku tuuraan aad at - waa qayb weyn oo ka mid ah rafcaanka. Ma aha oo kaliya u quudhin kasta cusub ku soo dejin doonaa caqabadaha deegaanka cusub oo dagaal, laakiin potions iyo hubka waa random aad - taasoo la micno ah kaliya qaadashada glug la dicing geerida. Ciyaartoyda u leeyihiin in ay noqon qabsiga halkii xafididda caqabado gaar ah, iyo Xoola baxay biimayn dheer markii qalmay ku duceysanayaan idinka gees ah qayb ka mid ah xiiso u noqdo.
Fortress cilin (Bay 12 Ciyaaraha, 2006)
Fortress cilin. Sawir: Bay 12
hal ku dhiga ah ee bulshada kulankaan ayaa waxaa oo dhan ayaa sheegay in: "Badiyay waa madadaalo!"Fortress cilin waa ciyaar ah oo uu u waxyoonay oo dhan epics tiraab on the foolanayo ciyaartoyda 'degsiimooyinka ee dhicisoobay, inta badan kaas oo bilaaban off yar ka dibna si deg deg ah ku dhicin habkaan kumanyaalka reer wax xumaan kara. Wolves, god-tago, abaar, qol-qandho, daadad, Godoo kale hoos ilaah Jinni ... gaabinta waa lama huraan, iyo ma aha oo kaliya samayn dwarves aad tegi waalan mayso - waxay inta badan abuuro shuqullada tahay si ay u muujiyaan waxa ka dhacay. Waxaa jira badan oo kulan adag, laakiin guud ahaan, salna for characters khayaalka soo jeedinaya Fortress cilin waa wax gaar ah.
The Adventure of Little Ralph. Sawir: New Corporation
Dhibka in xaaladda Armaajada by a Japan-kaliya sii daayo suubban, Adventure ee Little Ralph ciyaaraa sida waxaa la been abuurtay ee ku shidan design ciyaarta Arcade, laakiin waa in xaqiiqada si gaar ah PlayStation asalka iyo PSN. Dhibcaha diiradda, adag sida cadaabta iyo gudubyadaas Mystique nidaam, platformer dhaqanka maanta maxkamadda wadaraha saddex-tiradaasi suuqa ururinaysa, dheeraad ah u diidaya dhagaystayaasha ballaadhan u qalmaa. Waxaa "badbaadiyo gabadha cidhiidhi" sheeko laga yaabaa in hackneyed, laakiin dagaal rogaal Tababaraha culus in loo cusboonaysiiyo TAoLR sida garaaca-'em-up u adeegaan si ay u mashiin oo kala duwan, iyo adkeeyo ay sumcad sida mid ka mid ah platformers imtixaanka ugu weli horumariyo.
The Tacaburka yaab leh ee Woodruff iyo Schnibble ah (Coktel Vision)
The Tacaburka yaab leh ee Woodruff iyo Schnibble ah. Sawir: Sierra Entertainment
Dhibaatada kulan inta badan waa arrin jirrabaya awooda ciyaaryahanka si loo xakameeyo usii iyo fal at xawaaraha. kulan u quudhin narratively madow Coktel Vision ee, Si kastaba ha ahaatee, waa halkii tijaabo ah akhbaar semiotic. Its Sheeko post-apocalyptiga la sheegay la tiro badan oo erayo kooban, kuwaas oo qaar badan mari aan qeexitaanka, halka ay barato waayo hadalka aan macnaha aad u fiican wareer. Xitaa clockwork Orange lahaa qaamuus. Oo haddii aad ku jirrabeen in la isticmaalo maxkamad iyo qalad in crack xujooyinka ay, loo digay in tirada sheer ee alaabada iyo agabka oo quirks caqli gal ka dhigi daba dheeraaday waxa a, habka cabbudhinayo.
Haddii nooca kulan kasta waa kan ugu wada isku dhib, waa 2D Arcade biqil-'em-up, loo yaqaan ayaa maanta sida shmup ah. Oo waa Cave sameeysa in riixo Addomahaaga foomka sida kale ma jiro. Waa kuwee ciyaarta Cave waa adag yahay heer sare ah shakhsi ahaan, laakiin marka la eego dhib undiluted, hab Ultra caan Mushihimesama ah cayayaanka Kaapelitalo ee uu ku qaato. Waxaa jira wax ka yar ee intricacy ee farsamo taas oo ka dhigaysa sii daayo kale by istuudiyaha laga yaabaa in sida ugu badan u baahan, laakiin iyada oo tirada sheer ah rasaas in buuxiyo shaashadda, Mushi Ultra samatabbixiyaa ciribtir ah in uu yahay sida axsaab si ay u daawadaan sida ay waynno inuu u ciyaaro.
In jeexdin The (Roxor, 2004)
Lagu jeexdin ah. Sawir: Roxor
Kasta oo ciyaarta Arcade music leeyahay awood u dhib Dhuur. Qaado on qaar ka mid ah electronica-BPM sare on dhib ah hawl dejinta, iyo haddii aad garaac aad cagaha on a mashiinka Dance Dance Revolution ama ka badan tu of laabnayd ah sida EZ2DJ taagan, caqabad ku noqon doonaa weyn. yar barbardhigi, Si kastaba ha ahaatee, in calanka dhigay by hababka Single of In jeexdin The, ugu horeeyay ee taxane ah oo ku noolaa-gaaban ka studio-ku-saleysan Austin Roxor. Qaar ka mid ah kuwan raadkaygay ku, marka ciyaaray on goob X ciyaarta ee, u muuqdaan in ay doonayaan in dhaqdhaqaaqa jidhka ciyaaryahanka in uu yahay gudaheedana sinaba uma ay aqoon saday waayo horumar aadanaha.
Super Hilibka Boy (Hilibka Team, 2010)
Super Hilibka Boy. Sawir: Hilibka Team
Haddii uu jiro hal daqiiqad in qeexayaa waayo-aragnimo ka ciyaaro Super Hilibka Boy, waxaa si deg deg ah prodding badhanka qeybtii deg deg ah. Marxaladaha undersized platformer ee qarkiis oo la khataraha, weli kugu dhiirinaynaa in aad ciyaaro xawaaraha caraysan. Sidaas darteed, waa kulan ka mid ah ay ku guul darreysatay in ka badan oo mar kale in ka badan. Si kastaba ha ahaatee, by jidaynayey for xirey kadibna kala-labaad, waxaa jira ku dhawaad ​​ma dhibic in dardar sida waxaad kortaan loop ee isku dayaya iyo dhimanayaan. sida oo kale, Super Hilibka Boy shaqeeya ciyaartoyda ay galaan xaalad ah afarjeer riyooday ka qaadan karto saacadood inuu ka soo kabsado.
Maxkamadeyn qeybo (RedLynx, 2014)
Maxkamadeyn qeybo. Sawir: RedLynx
Waayo, halka wanaagsan, kulankaan motorcycling dhinac boggan dareemeysaa aragnimo meditative - ka dibna qalooca dhib lama filaan ah laayey toosan waayo, samooyinku. Waxaa markaas waa in ciyaarta ayaa shaaca ka qaaday qaabka run; puzzler a physics nightmarish uu gashan jirin sida ciyaarta driving a. Just sidee baad ku heli badan in derbiga toosan? Imisa darajo of wareeg ayaa loo baahan yahay inay soo xerogeliyaan on in sagxada ka yeellay-down? Jawaabtu waa Shukaansiga la midka kasta oo ganaax iyo miisaanka baaskiil ee; Shukaansiga ah sacab muggiis oo ciyaartoy caalami ah ayaa lagu soo waramayaa in ay ku baasana ku filan oo ay ku aced haray ciyaarta ee.
Battle Garegga Sawir: 8ing
Jaleecada a, Battle Garegga u muuqda in uu ciyaaraha ku adag tahay a dhigma aad jabkii dhabta 2D caadiga ah: ka daran adag, laakiin waxba absurdly si. Si kastaba ha ahaatee, waa jidka ciyaarta ka dhigaysa aad ciyaaro in riixo gelin "adkaa abid" field. Battle Garegga leeyahay darajo la yaabka lahaa oo adag, in uu yahay, dhib, islana sida aad u ciyaaro. Maareynta darajo in ay sii ciyaarta hab playable fogaado qaar ka mid ah baaritaanada iyo gunooyinka awood, iyo xitaa "suiciding", halkaas oo dad dhintaan on Ujeedada. Ciyaaro si fiican loola jeedaa ku ciyaari laayeen, awooda kaydka nolosha hoose iyo hub hayaa, waana nafaqo oo xiiso leh. haystaha hadda rikoorka adduunka Kamui ayaa lagu qabtay iyo roonaanin booska Leaderboard iyada lagu qiyaasay ah 18 sano play oo gooni loo sooco, muujinaya go'an baahida Garegga.
Rick khatarta (Design Muhiimka ah, 1989)
Rick khatarta. Sawir: Design Muhiimka ah
Core ee caabudeen Indiana Jones waa platformer a ciyaaray a pixels yar waqti, qarka weeraryahanka si aad u aragto waxa soo socda idinku dili doonaa. Waxaa jira Sabuul, godad iyo dhagxaanka at jeedin kasta, iyo waxbarashada ah iyadoo ku guuldaraysatay waa ku dhawaad ​​jidka keliya ee in la sii wado. Your alaabada xun aad u kooban, oo waxaa jira qaar ka mid ah sax wayn culus loo baahan yahay in sacab muggiis oo qaybaha gaar ahaan calool adag iyo niyad. Years ka dib, Core tegi lahaa ay u farsameeyaan kulan kale oo baahsan xabaashii on, by kaas oo markii studio ayaa sida muuqata bartay sida loo daweeyo yar oo dheeraad ah taageerayaasha ay si cadaalad ah.
Shadow of bahalka II (Psygnosis, 1990)
Shadow of bahalka II. Sawir: Psygnosis
Sheeg Shadow hore ee bahalka, inay dadkii badnaa xaq u, oo ay u badan tahay waxaad maqli doonaa musings nostalgic ku saabsan sida ay isticmaalka hormuudka of farsamada boggan parallax riixay muuqaallada kulanka galay marxalad cusub. Weydii waa cidhibta, iyo jawaabta waxaa laga yaabaa in yar oo subag yar. Fowdadii-diiradda The, ciyaarta madal multi-jiho ayaa si toos ah kor dalbanayaan lahaa haddii ay idin siiyey hanuunin. Laakiin ma aha, aad ka tago in ay ka shaqeeyaan wax kasta oo naftaada. In muddo Youtube iyo walkthroughs hor, in keligiis ahaa ku filan si ay Shadow dhigi bahalka II mid ka mid ah ugu adag ee ay maalinta.
Liiska ciyaar lightgun yaqaan laga yaabaa in u muuqdaan kuwo ka soo baxa meeshan liiska sidaan oo kale ah. Ka dib dhan, qof walba oo uu booqday Arcade ah badda oo duqoobay ayaa ay u badan tahay lagu tuuray haystaa sacab muggiis oo lacagta qadaadiicda galay booska ee Namco ee blaster seef laboodkiisa sababay, iyo ma aha waxaan ku farxaa dareemay. Laakiin isku day in aad buuxiso iyo Time Crisis ugu horeysay ee si sax ah - waa nadiifinta ee credit hal - waana dhib wuxuu bilaabaa in uu noqdo cad. la'aanta ah tilmaame hit ka tago god taagmi ee awoodda aad ku habboon looga jawaabo, iyo qaar ka mid ah Curt punishingly qaybaha lagu tiriyaa u adeegaan si ay u si gaar ah u fudud in ay si degdeg ah track ciyaarta ka badan screen.
Waxaan doonayaa inaan Noqo Guy ah: Filimka: Ciyaarta (Michael O'Reilly, 2007)
Waxaan doonayaa inaan Noqo Guy ah. Sawir: Michael “Kayin” O'Reilly
Kuwa ciyaaray this khasnad platforming freeware in si rasmi ah marnaba ka tagay beta tahay ka heli doontaa adag tahay inay iska ilaawaan. Karkariyo ay nooca ugu dhaadheceen in xubno ay aasaasay, Waxaan doonayaa inaan lagu Guy ayaa loo soo sameeyay sida jawaab u ah ka dibna diiqid, waxashnimo dalbanayaan ciyaarta flash Japanese magacaabay Jinsei Owata. O'Reilly dhaadhiciyay wuxuu ku hardiyi yaabaa dhib Jinsei Owata ee yar oo dheeraad ah, iyo waxa ay u muuqataa uu ku guulaysto. Sidaas darteed, kulankiisii ​​uu noqday marjac imtixaanka ugu horyaal indie a. Super Hilibka Boy ciyaaray ninkii IWBTG ee, Kid The, oo sidoo kale la yaab leh sida tababaraha ugu danbeeyay ee dhismaha ku qanci of Jinsei Owata.
Weaponlord (fikradaha Visual, 1995)
Weaponlord. Sawir: fikradaha Visual
dembiga ugu weyn ee this garaaca-'em-up-to-si toos ah Console ahaa in ay isku dayeen in ay si ka duwan wax u qabtaan. Waxaa soo dhawaaday heshiisyada gacanta Xarakada Arcade ka soo beerta bidix, isticmaalaya kala duwan oo combos button cajiib iyo karaka d-gashto, laakiin natiijada ahaa nidaam adag oo aad u dalbanaya ciyaartoyda ugu caadiga ah iyo wada horjeedda in tartanka-'em-up garaaca go'an. characters computer-ka taliso ayaa sidoo kale ahaayeen halkii aad u wanaagsan at kulanka u gaar ah, iyo Weaponlord waxaa ugu dambeyntii celin si ay qaddar sida Armaajada ah ugu caan ku tahay isagoo dagaalka ugu horeeyay ee loogu talagalay la play online maanka. Haddii aad la jirrabo, dekedda MegaDrive waa wax yar ka badan Dambi badan ay adeer SNES.
Iyadoo Nidhogg waa ciyaar ugu caansan Messhoff ee, Flywrench waa in ay noqdaan ay adag. The set-up waa xeelad fudud; hanuuniyo spaceship ah aan la taaban karin iyada oo harya yar ka fiiriyaana ay wadajir aan waxba galabsan, beddelo midabka sida aad noqotay. Runtuna waxay tahay mid aad u kala duwan, halkaas oo si joogto ah u dhimanayaan iyo howleheedii waa heerka ugu. Flywrench laga yaabaa inay tahay kulanka ugu adag ee sanadkii la soo dhaafay, ama sagaalkii sano ee lasoo dhaafay, haddii aad mid ka mid ah dhowr ah kuwaas oo ciyaaray 2007 asalka ah, oo wuxuu arkay ah ha loo sii daayo online understated iyo waxyoonay xarig koob abuure afuufa Jonathan ay u farsameeyaan version a darriya fudud loo magacaabay Nicewrench.
AMD u bilawday Firepro W9100 OpenCL xirfadda ...
Xbox One S Available in August la 4K Movies iyo ...
ZX Spectrum mar uu biiq sida muraaqooda for 80s casriga ...
35662	2 kulan Arcade, Qodobka, Dhaqanka, Features, dhaqanka Game, Ciyaaraha, Nintendo, PC, PlayStation, kulan Retro, Rich Stanton, Technology, Will Freeman, Madaxweyne Siilaanyo Oo
← La kulan Queen of Robots waxtar lahayn Ku soo dhawow Workforce Robot-Salaysan The →